စင်္ကာပူအခက် မြန်မာအချက် ဖြစ်တော့မှာလား…? – New Of Burmese
စင်္ကာပူအခက် မြန်မာအချက် ဖြစ်တော့မှာလား…?
အရည်ပျော်သွားတဲ့ စင်ကာပူအမြန်ရထားဘူတာကြီးဒီဇိုင်း။ဒီကနေ့ကြေငြာလိုက်တဲ့သတင်းအရ ၃၅၀ ကီလိုမီတာအရှည် မလေးရှား-စင်ကာပူအထူးအမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာ ပျက်ပြယ်ခဲ့ရပါပြီ။ဒီရထားစီမံကိန်းဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံတန်ပြီး မလေးရှားဖက်ကနေ ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ဖက်က လိုချင်သလို ညှိနှိုင်းမရကြတဲ့အဆုံး ပျက်ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီရထားလမ်းပြီးရင် မြို့တော် ၂ ခုအကြား ခရီးသွားကြာချိန် ၉၀ မိနစ်အထိ လျှော့ချပေးသွားနိုင်မှာပါ။လက်ရှိအနေအထားအရ ဒီ ၃၅၀ ကီလိုမီတာခရီးကို ကားဖြင့်သွားရင် ၄ နာရီကျော်အောင် မောင်းရပြီး၊ လေယာဉ်နဲ့ဆို ၅ နာရီအထိ ကြာနိုင်ပါသတဲ့။
စီမံကိန်းဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက သန္ဓေတည်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ မှာ တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာမို့ စင်ကာပူအစိုးရဖက်က ခုလိုဘူတာဒီဇိုင်း၊ ရထားလမ်းဒီဇိုင်းခတွေ၊ မြေဝယ်ရတာတွေ၊ စီမံကိန်းကြီးကြပ်ဖို့ ပညာရှင်တွေခန့်ထားခဲ့တာတွေ၊ဆောက်လုပ်မယ့်သူတွေကို တင်ဒါခေါ်ပြီးသားမို့ မကြာခဏ နောက်ဆုတ်ရလို့ ကတိပျက်စရိတ်တွေ၊ မြေတူးပြီးသားနေရာတွေကို မြေပြန်ဖို့စရိတ်တွေ စသဖြင့် ဒီစီမံကိန်းအတွက် ငွေသန်းရာချီကာ သုံးပြီးနေလို့ မလေးရှားဖက်ကနေ စာချုပ်အရ ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံသွားတော့မှာပါ။မလေးရှားဖက်က မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ ဒီစီမံကိန်းကို သူတို့ဖာသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊
ရထားလမ်းကို စင်ကာပူတဖက်ကမ်းက ဂျိုဟိုးမြို့မှာ ဂိတ်ဆုံးစေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာသာ ရွှေလီ-မန်း-နေပြည်တော်-ကျောက်ဖြူအမြန်ရထားလမ်းကို BRI အောက်က ဆောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ စင်ကာပူကိုထပ်ကျော်တက်မယ့် အထူးအခွင့်အရေးကို ပြည်သူတွေရင်ခုန်ခံစားကြရပါလိမ့်အုံးမည်။ 😂
Credit. Zin Min Nyein
အရညျပြျောသှားတဲ့ စငျကာပူအမွနျရထားဘူတာကွီးဒီဇိုငျး။ဒီကနကွေ့ငွောလိုကျတဲ့သတငျးအရ ၃၅၀ ကီလိုမီတာအရှညျ မလေးရှား-စငျကာပူအထူးအမွနျရထားလမျးစီမံကိနျးဟာ ပကျြပွယျခဲ့ရပါပွီ။ဒီရထားစီမံကိနျးဟာ ကနျဒျေါလာ ၂၅ ဘီလီယံတနျပွီး မလေးရှားဖကျကနေ ၂ ကွိမျတိုငျတိုငျ နောကျဆုတျပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံခဲ့ရပွီး နောကျဆုံးမှာ သူတို့ဖကျက လိုခငျြသလို ညှိနှိုငျးမရကွတဲ့အဆုံး ပကျြခဲ့ကွရတာပါ။ဒီရထားလမျးပွီးရငျ မွို့တျော ၂ ခုအကွား ခရီးသှားကွာခြိနျ ၉၀ မိနဈအထိ လြှော့ခပြေးသှားနိုငျမှာပါ။လကျရှိအနအေထားအရ ဒီ ၃၅၀ ကီလိုမီတာခရီးကို ကားဖွငျ့သှားရငျ ၄ နာရီကြျောအောငျ မောငျးရပွီး၊ လယောဉျနဲ့ဆို ၅ နာရီအထိ ကွာနိုငျပါသတဲ့။
စီမံကိနျးဟာ ၂၀၁၃ ခုနှဈကတညျးက သန်ဓတေညျခဲ့ပွီး၊ ၂၀၁၆ မှာ တရားဝငျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာမို့ စငျကာပူအစိုးရဖကျက ခုလိုဘူတာဒီဇိုငျး၊ ရထားလမျးဒီဇိုငျးခတှေ၊ မွဝေယျရတာတှေ၊ စီမံကိနျးကွီးကွပျဖို့ ပညာရှငျတှခေနျ့ထားခဲ့တာတှေ၊ဆောကျလုပျမယျ့သူတှကေို တငျဒါချေါပွီးသားမို့ မကွာခဏ နောကျဆုတျရလို့ ကတိပကျြစရိတျတှေ၊ မွတေူးပွီးသားနရောတှကေို မွပွေနျဖို့စရိတျတှေ စသဖွငျ့ ဒီစီမံကိနျးအတှကျ ငှသေနျးရာခြီကာ သုံးပွီးနလေို့ မလေးရှားဖကျကနေ စာခြုပျအရ ကုနျကစြရိတျတှအေတှကျ လြျောကွေးတောငျးခံသှားတော့မှာပါ။မလေးရှားဖကျက မီဒီယာတှရေဲ့အဆိုအရ ဒီစီမံကိနျးကို သူတို့ဖာသာ ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားမှာဖွဈပွီး၊
ရထားလမျးကို စငျကာပူတဖကျကမျးက ဂြိုဟိုးမွို့မှာ ဂိတျဆုံးစမေယျလို့ ဆိုပါတယျ။မွနျမာပွညျမှာသာ ရှလေီ-မနျး-နပွေညျတျော-ကြောကျဖွူအမွနျရထားလမျးကို BRI အောကျက ဆောကျဖွဈခဲ့ရငျတော့ စငျကာပူကိုထပျကြျောတကျမယျ့ အထူးအခှငျ့အရေးကို ပွညျသူတှရေငျခုနျခံစားကွရပါလိမျ့အုံးမညျ။ 😂
Previous Article “ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘုရင့်နောင် လက်ထက်ကဲ့သို့ပင် ယနေ့ချိန်တွင်လည်း အင်အားကြီးမားနေတဲ့ မြန်မာ့တော်ဝင်အမြောက်တပ်ဖွဲ့များ
Next Article ကုန်း/ရေနှစ် သွယ်တိုက်ပွဲ ဝင်စစ်ဆင်မှု လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက် လာသော ထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ်